Ivan Andreevich Krylov kuyinto sibalo abalulekile ezincwadini Russian classical. Nokho, kufanele kuphawulwe, umbhali wethu uyazi futhi phesheya. Abazali abaningi abanezingane babhalisele esikoleni, ngizibuze: kanjani ukukhetha kuyinganekwane, okuyinto kulula ukufunda? Akusiyo imfihlo ukuthi abafana ngokuvamile bafundzi njengemsebenti wasekhaya bamenyiwe ukufunda umbhalo othize. Abaningi ngesikhathi esifanayo anakekele ngempela ngalokho inganekwane lesifisha kakhulu? Ukuze uthole ezinjalo, izingane eziningi zakulelo uyavumelana kabusha ufunde cishe lonke iqoqo, zona ngokwazo kuhle kakhulu. Lesi sihloko sichaza okushiwo the izinganekwane ethandwa iningi Ivan A. futhi linikeza iseluleko sendlela ngcono izincwadi umsebenzi wesikole.
Kungani le mibhalo esasebenza?
Kungakhathaliseki ukuthi singakanani isikhathi isidlulile kusukela ekudalweni lezi yobuciko yokuqala zabuna isiRashiya, izindikimba zabo bahlale ethandwa futhi ngomzuzu wamanje. Phela, noma engu-egcekeni, inkinga, eqinisweni, kukhona okufanayo.
uhlobo Fable ngemisebenzi Krylov unendima ekhethekile. Nge imibhalo amancane futhi uyafundisa umbhali wembula umlando zokuziphatha ngamunye kwembula incazelo yalo nokulisebenzisa ukubaluleka. Ngaphezu kwalokho, esikhathini sethu, kuba yilutho ngezinye izikhathi ayeke ngesikhathi, ukushintsha usuka ukukhathazeka kwansuku yezindaba ezihlekisayo, ikakhulukazi ngoba njalo esekelwe umbono ezithakazelisayo.
inganekwane iDemo lifundisa indlela ephelele ekuphileni, evulekile izingane kanye nabantu abadala amathuba, ikhono ukwakha ukubukeka amaqiniso kwansuku elisizungezile.
inganekwane Wonderful cishe bonke abantu abadala zaziwe ingane. essence yayo itholakala iqiniso ukuthi kwakukhona eduze Dragonfly kanye Ant. Uma uhlala ngqá ngelinye ilanga, sithokozela kuphela ngomzuzu wamanje, lona wamuva ngokuhlakanipha kanzima ulungiselela ebusika futhi kubanda. ngokuhlakanipha Intuthwane futhi umsebenzi wakhe onzima okuthuleyo okuphikisana ukuphila gay, okuyinto Dragonfly. Ngenxa yalokho, kanzima a winner, futhi angenzi lutho ophoqelelwe ecela ebusuku.
I zokuziphatha okulula ukuyiqonda: udinga kwadingeka basebenze kanzima ukuze kufinyelelwe lo mgomo, kungenjalo ungaya ngaphandle uphahla phezu kwamakhanda abo futhi ukudla. Uma ukhetha Fable kanye nengane, okuyizinto lula ukufunda, kusho kutsi itheksthi uphelele le njongo.
"Monkey kanye izibuko"
Ekuqaleni eyibhalela uthi inkawu, umlingiswa oyinhloko webhayisikobho izinganekwane, ekugugeni kwakhe baba uyibona iyagula. Yena luqobo angazanga indlela yokuxazulula le nkinga, ngakho-ke, ngaqala ukulalela imibono yabanye. At izindleko ezinye umzamo Amazing emilenzeni yakhe babe ngokuzumayo izibuko. Kodwa nakhu inkinga: namanje akazi ukuthi ukuzisebenzisa! Ngemva uchungechunge imizamo akuphumelelanga ukusebenzisa amaphuzu ayikwazanga ukutholakala, kanye Monkey wazihlephula, ashayeke phansi.
inganekwane iDemo kanje, ufunda ukwamukela izimo ezahlukene ukuphila ngendlela lapho bazenza kithi. Uma Monkey ngempela kahle wafika isinqumo isimo, umphumela kwenzakala omuhle. Kufanele ukuqoqa ukwaziswa okwengeziwe, ukuzama wonke amaqhinga nezindlela zokusebenzisa izibuko. Yena abonise ukuphelelwa isineke futhi ube nolaka, ngoba yena wajeziswa.
"I Swan, umdlavuza kanye Pike"
Uma livume kuyinganekwane, okuyinto kulula ukufunda, umbhalo kungenziwa waphawula indlela kalula ziqondakala indlebe futhi kahle. Ayikho into elukhuni lapha, indaba efundwa umoya. Ngaphezu kwalokho, kuyinto encane ngokwanele ivolumu. Ngemva ezinikezwa eziningana ingane izokwazi ukukhumbula ngekhanda. I zokuziphatha inganekwane lisifundisa ukuthi kuzo zonke izimo ezenzeka ndawonye, kubalulekile ukuba sifinyelele isimo ubunye ne abalingani.
Ngoba noma yiziphi izinto kunjalo, thina uyingane yokutholwa, kodwa uma ngesikhathi esifanayo bonke uyodonsela ngakuye, ukuze sifinyelele ubunye yalokho okuhle ngeke zisebenze. Funda umbhalo, ngeke kube nzima. Izingane ngeke bathande. Ukuze umphumela engcono kunconywa nesigaba kuyinganekwane futhi udlale indima yakhe. Sekuvele kukhona ngokunembile muntu bahlala banganandaba!
"I Fox kanye Amagilebhisi"
Le ndaba ajwayelekile kubo bonke. Fox sabuka uju oyifunayo, kodwa ayikwazanga ukufinyelela legatsha ukuze ukuthole. Ekugcineni, wanquma nokuthi 'wayesemdala oluhlaza ", kodwa ngoba kudingeka. Ingqikithi yalo inganekwane yilesi: lapho asikwazi ukufinyelela imigomo ebaluleke bona, ngokuvamile underplayed ukubaluleka kwayo. Lokho impungushe ngemva yahlulelwe wayengenayo ukukhokhela ukuthi adle amagilebhisi, devalued nhlobo. Le ndaba ibonisa lukhulu maqondana Inhloso efiselekayo kanye nobunjalo umuntu ofuna ukuba uwufinyelele. Ukuze ukufunda kungathatha futhi lokhu inganekwane.
Kanjani ukufundisa inganekwane nengane?
Izingane zasesikoleni babevame njengemsebenti wasekhaya ukufunda umbhalo kancane Ivan Andreyevich. Ngaphezu kwalokho, inikezwe nje inganekwane ethile, futhi ilungelo lokukhetha ayizintandokazi zakho. Futhi ingaphezu efanele! Ngaphambi kobana azinze kunoma iyiphi enye, ingane kabusha ufunde izindaba okungenani ezimbalwa ezifundisayo futhi funny.
Abazali abaningi ukubuza indlela ukukhetha kuyinganekwane, okuyinto kulula ukufunda? Qala nje ukwethula indodana noma indodakazi yakho nge umsebenzi omlobi. Ngitshele ngakho wukuthi uyazi ukuthi kuyoba ungcono okunomkhawulo kokufunda incwadi futhi ekutholeni ukwaziswa okukuyi-Internet. Yabelana ngomuzwa wakho mayelana nendlela yokufundisa ngokwabo izinganekwane ngekhanda kungakanani okuhlangenwe nakho okuthakazelisayo. Umgomo wakho kuthakazelise ingane, ukuvusa kuye isifiso ukuhlola kakhulu ematheksthi lamafisha. Kodwa ngisho noma ingane ingavumi zibonise intshiseko Ikakhulukazi, wena ukhetha ezifanele kakhulu kuye kuyinganekwane kanye ngekhanda.
Lesi sihloko izipho Yiqiniso, akuzona zonke izinganekwane I. A. Krylova. Uhlu ngobubanzi okuningi futhi ndawonye bakha yenqwaba obukhulu. Kodwa ngisho phakathi imibhalo lapha, ungakhetha indaba eziyokhanga kakhulu, futhi ufunde ke. Into esemqoka nalokhu - ababakhuthazi ingane yakho ayidingi kuye ukuze balukhulume kahle izinto ngokushesha ngangokunokwenzeka, futhi ukwenza kancane kancane, ngaphandle ishesha. Khumbula, izingane okungenani uzimisele ukwenza lokho kubonakala yisicefe futhi ungakujabulisi.
Isithombe Chatsky ( "Maye kusukela Wit"). izici Chatsky
Interior incazelo efulethini: izitayela eziyisisekelo kanye nezincomo ochwepheshe
Ukusetshenziswa plasma platelet-ocebile. Platelet-ocebile plasma kuphi futhi lokho ukusetshenziswa?